कतिले घट्यो ग्लोबल आईएमईको नाफा ? - Everest Dainik - News from Nepal
कतिले घट्यो ग्लोबल आईएमईको नाफा ?
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैङ्कको चैत मसान्तसम्ममा नाफा २ प्रतिशतले घटेर रू.१ अर्ब ४४ करोडमा सीमित भएको छ ।
बैङ्कको सञ्चालन नाफा घटेकाले र खर्च बढेकाले नाफामा कमी आएको हो । चैत मसान्तसम्ममा बैङ्कको चुक्तापूँजी २२ प्रतिशतले बढेर रू। ८ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ भने रिजर्भ कोषमा रू. ३ अर्ब ८६ करोड छुट्याएको छ ।
याे पनि पढ्नुस ग्लोबल आईएमई बैंक र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर
बैंकको लगानी रू. १८ अर्ब ४० करोडभन्दा बढी रहेको छ ।
वैदेशिक मुद्रा विनिमयबाट बैंकले रू. १ अर्ब २२ करोड आम्दानी गरेको छ । बैंकको खुद ब्याज आम्दानी रू.२ अर्ब ६१ करोड, कर्मचारी खर्च रू. ७२ करोड ७९ लाख, अन्य सञ्चालन नाफा रू. ७८ करोड ८२ लाख र सञ्चालन नाफा रू. १ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ ।
याे पनि पढ्नुस ग्लोबल आइएमई बैंकले मिसकल बैंकिङ सेवा सुरु
चैत मसान्तसम्ममा बैङ्कले रू. १ खर्ब २ अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरी रू. ८९ अर्ब ६ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
सोही अवधिमा बैङ्कले रू। ३५ करोड ६१ लाख खराब कर्जा उठाउन सफल भएको छ भने निष्क्रिय कर्जा १ दशमलव २९ प्रतिशत रहेको छ । सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा रू. २१ करोड ६९ लाख छुट्याएको छ ।
याे पनि पढ्नुस ग्लोबल आइएमई बैंकमा रोजगारीको अवसर
प्रतिशेयर आम्दानी (वार्षिक) रू. २१ दशमलव ६७, मूल्य आम्दानी अनुपात १४ दशमलव ३५, तरलता अनुपात २६ दशमलव ९५ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १ सय ४३ दशमलव ४४ रहेको छ ।